Fiparitahan'ny valanaretina :: Olona roa amby dimampolo nifindran’ ny Covid-19 teto an-drenivohitra • AoRaha
Fiparitahan’ny valanaretina Olona roa amby dimampolo nifindran’ ny Covid-19 teto an-drenivohitra
Mitady hiverina eto andrenivohitra ny foiben’ny valanaretina. Tao anatin’ny roa andro monja no nampiakatra ambony be ny isan’ireo olona vaovao voatily ho mitondra ny “Covid-19”, ka ny omaly fotsiny no efa nahatratra roa amby dimampolo.
Maromaro ireo tanàna voakasika: Ambanidia, Ampitatafika, Andohatapenaka, Tsaramasay ary Bemasoandro Itaosy… Etsy ankilany dia somary mampanahy ny fivoaran’ny toepahasalaman’ny antsasak’ireo mararin’ny valanaretina izay tsaboina, etsy Befelatanana.
Nambaran’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana amin’ ny ady amin’ny Covid-19 (CCO), omaly, fa mahatratra valo amby fitopolo sy telonjato sy arivo ireo olona mitondra ny tsimok’aretina, nanomboka tamin’ny 19 marsa 2020 hatramin’ny omaly, rehefa nampian’ireo marary vaovao miisa iraika amby enimpolo. Miparitaka amin’ireo hopitaly efatra eto Antananarivo (Befelatanana ny telo; iray eny Andohatapenaka) sy any Toamasina (CHU Morafeno ny telo; iray any Analakininina) ireo olona ahitana soritr’aretina mampiahiahy.
Vesatry ny hatsiaka
Tsy nisy kosa ny namoy ny ainy, ka enina ambin’ny folo sy sivinjato ireo olona manaraka fitsaboana. Mihamaro hatrany ireo sitrana, ka ao anatin’ireo olona dimampolo sy efajato naharesy ny valanaretina ireo marary telo amby telopolo voamarina fa sitrana, omaly.
Heverina ho mifanindrandalana amin’ny fanitarana ny ora fiasana sy ny fivezivezena eto an-drenivohitra ary ny hatsiaka mamifirify, amin’izao fotoana izao, no antony mampitombo isa an’ireo marary vaovao roa amby dimampolo teto Antananarivo ireo. Nambaran’ny mpitsabo iray eny amin’ny hopitaly Befelatanana fa: “saika ahitana soritr’aretina avokoa ny antsasak’ireo mararin’ny Covid-19 tsaboina eny an-toerana, hatramin’ny omaly”.
“Mampihena ny hery fiarovana amin’ny olombelona ny hatsiaka ka mila mitandrina ny tsirairay”, hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle raha nanentana ny rehetra hanaraka ny fepetra rehetra hiarovana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina.
Tahaka izany koa ny fanajàna amin’ny antsakany sy andavany an’ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra mba hisorohana amin’ny fifindran’ny “Covid-19”, dia ny elanelana iray metatra sy ny fanasana tanana matetika ary indrindra ny fanaovana ny aron-tava. Mitady ho goragora sahady ny fanarahana an’ireo fepetra ireo, ankehitriny.